नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले समग्र मुलुक निर्माणको लागि कांग्रेस आन्तरिकरुपमा बलियो हुनुपर्ने बताए - सिधा दृष्टी
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले समग्र मुलुक निर्माणको लागि कांग्रेस आन्तरिकरुपमा बलियो हुनुपर्ने बताएकाछन् ।
आज राजधानीमा आयोजित दीपावलीको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा नेता महतले बलियो कांग्रेसका लागि गुटबन्दी अन्त हुनपर्ने बताए । कांग्रेसकै नेतृत्वमा मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण सम्भव हुदै गएकोले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक भएर जुट्नुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री समेत रहनु भएका नेता महतले २०४६ यता मुलुकमा धेरै परिवर्तन भएको बताए । कंग्रेसकै नेतृत्वमा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनसंगै आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनहरु भएको दाबी गरे ।
नेता महतले खुला बजार नीतिका कारण स्वास्थ्य शिक्षा र पूर्वाधारको क्षेत्रमा समेत प्रतिस्पर्धाको अवस्था आएको बताए । कांग्रेसकै बलमा मुलुकको थप परिवर्तन सम्भव भएकोले नेता कार्यकर्ता बलियो कांग्रेस निर्माणमा जुट्न समेत आग्रह गरे ।